Loharanon-kery azo havaozina sy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny ho avy | Fanavaozana maintso
Loharanon-kery azo havaozina sy ny lanjan'izy ireo amin'ny ho avy
Mihabetsaka ny mandroso eto amin'izao tontolo izao loharanom-baovao angovo azo havaozina. Izany dia satria efa antomotra ny fanjifana solika fôsily ary ny fahalotoana ateraky ny fandoroana lasantsy, solika ary arintany dia mandroso amin'ny vokadratsin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny tombom-barotra azo havaozina dia manatsara isan'andro ary ny haitao mahomby amin'ny angovo dia manintona kokoa ny filokana amin'ny angovo hafa.
Te hahafantatra ireo loharano angovo azo havaozina sy ny maha-zava-dehibe ananan'izy ireo amin'ny ho avin'ny herin'ny planeta?
1 Mila loharanon-kery azo havaozina bebe kokoa izao tontolo izao
2 Fiovana amin'ny maodelin'ny angovo eropeana
3 Karazana loharanom-pahalalana angovo azo havaozina isan-karazany
4 Fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina
5 Famatsiam-bola amin'ny famatsiam-bola azo havaozina
6 Antony hampiasana loharanon-kery azo havaozina
Mila loharanon-kery azo havaozina bebe kokoa izao tontolo izao
Ny angovo madio dia ilaina hatrany ary ilaina kokoa. Tontolo iray sy toekarena miorina amin'ny angovo azo havaozina no lakilen'ny fahazoana toerana eo amin'ny tsenan'ny angovo sy hahazoana ny fifaninanana. Ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina, na dia lafo aza amin'ny voalohany, dia afaka manampy antsika handresy ny tolona amin'ny fiovan'ny toetr'andro nandritra ny taona maro.
Andeha ho tadidintsika fa azo havaozina tsy mamoaka entona etona izy ireo, na farafaharatsiny farafaharatsiny farafahakeliny, raha ampitahaina amin'ny lasantsy fosil toy ny menaka sy arina.
Betsaka ny tanàna eropeana izay nanao dingana goavambe amin'ny tontolon'ny fanavaozana fanavaozana ary, noho izy ireo, dia afaka nampihena ny famoahana entona entona.
Na dia mety tsy dia mitaky izany aza ny lalàna eoropeanina, misy tanàna lehibe sy salantsalany izay dingana roa alohan'ny lalàna. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia nahavita nivoatra ara-teknolojia tamin'ny resaka angovo azo havaozina sy ny famoahana zavatra betsaka kokoa noho izay takian'ny lalàna izy ireo.
Fiovana amin'ny maodelin'ny angovo eropeana
Sarotra ny manova ny lamina angovo. Hatramin'izao dia niasa tamin'ny fomba "ahazoana aina" miaraka amin'ny lasantsy fosily izy io. Na izany aza, ny planetantsika mitaky ny hitarihana modely angovo vaovao mifototra amin'ny angovo izay tsy mamoaka entona trano fandraisam-bahiny hisorohana ny fiakaran'ny hafanana manerantany.
Ny andraikitry ny tanàn-dehibe sy ny orinasa lehibe manolo-tena amin'ny angovo madio dia tena ilaina mba hampiroboroboana ny fiovana mankany amin'ny maodely angovo efa voafaritra.
Na dia maika aza ny filan'ny planeta fanovana angovo dia toa manongilana sofina ny governemanta. Tsy miloka amin'ny angovo azo havaozina ny PP, fa kosa hitohy amin'ny tontolon'ny solika fôsily.
Ny tanàna toa an'i Barcelona, ​​Pamplona na Córdoba dia eo am-pamoronana orinasa fivarotana angovo kaominaly, na eo aza ny valindrihana izay manakivy ny fanjifana tena ary manasarotra ny lahasa fampiroboroboana eo amin'ny sehatra eo an-toerana.
Karazana loharanom-pahalalana angovo azo havaozina isan-karazany
Tokony ho ao an-tsaina fa misy loharanom-angovo azo havaozina marobe. Hatreto dia ny herin'ny masoandro sy ny rivotra no mahomby indrindra amin'ny ankapobeny.
Ny angovo geothermal dia miankina tanteraka amin'ny toerana misy ilay takelaka tektonika izay misy azy. Ny tena fampiasana azy dia ho an'ny fanafanana rano ho an'ny trano fonenana sy hopitaly.
Etsy ankilany, mahita angovo hydraulic isika. Ny angovo hydraulic dia entin'ny riandranon'ireo tahiry. Any Espana, noho ny haintany dia kely kokoa ny habetsaky ny angovo hydraulic vokarina. Miaraka amin'ny orana farany hatramin'ny volana febroary lasa teo, miakatra ny haavon'ny rano ny toho-drano ary miakatra indray ny herin'ny hydraulic.
Raha ny momba ny angovo azo avy amin'ny masoandro, dia mitovy ihany ny zavatra mitranga amin'ny angovo geothermal. Any Espana tena voafetra ny zavamaniry thermosolar noho ny fanapahana ny Governemantan'ny PP.
Fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina
Mihabetsaka ny olona no mihevitra ny mety hampiasa vola amin'ny fampandrosoana angovo azo havaozina. Amin'ny tranga marobe, ity fanapahan-kevitra ity dia tsy azo tanterahina raha tsy misy karazana famatsiam-bola, satria be ny vidim-piainana voalohany.
Na dia te hametraka panneaux solaires vitsivitsy aza ianao mba hitsitsiana ny volan'ny herinaratra, Tsy mora ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina. Matetika, ny vola ampanjariam-bola dia mandoa vola mandritra ny fotoana maharitra. Ny hany lafiny tsara amin'ny angovo azo havaozina dia ity taona ity ny vidin'ny takelaka photovoltaic dia nihena, satria taona vitsy lasa izay dia tsy azo natao ny niditra tamin'izy ireo.
Etsy ankilany, ny fandrosoan'ny teknolojia dia nahatonga ny fanamboarana panneaux photovoltaic manana fahombiazana bebe kokoa amin'ny fahazoana angovo, ka izany no mahatonga ny tombony bebe kokoa ary ny fe-potoana amortisation ny fampiasam-bola nohafohezina.
Ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina dia miha matetika hatrany noho ny politikan'ny angovo ampiharin'ny governemanta. Misy karazana famatsiam-bola marobe amin'ny angovo azo havaozina. Ireo dia miankina amin'ny fampiasana angovo ho an'ny olona iray na ho an'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa. Miharihary fa ny habetsaky ny takelaka takian'ny masoandro hividianan-tena dia tsy mitovy amin'ny orinasa hametrahana valan-javaboary iray.
Famatsiam-bola amin'ny famatsiam-bola azo havaozina
Raha mangataka indram-bola amin'ny fampanjariam-bola voalohany isika dia tsy maintsy mandray an-tsaina fa, rehefa hamerina izany dia hanana zanabola sy komisiona. Mba hisorohana an'izany dia azontsika atao mahazo indram-bola arahin'antoka amin'ny orinasa ara-bola eo amin'ny olona. Ireo fikambanana ireo dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny banky fa tsy.
Taona vitsy lasa izay dia nisy ny fisondrotan'ny fanavaozana tany Espana noho ny fanampiana nomen'ny Governemanta teo aloha. Saingy, tamin'ny fahatongavan'ny PP dia nanjavona ireo fanampiana rehetra ireo. Inona no nitarika an'ity vondrona ity hanameloka ny fitantanan-draharaha ankehitriny any amin'ny fitsarana noho ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fepetra omena ireo vola fanampiana sy vola fanampiana nifanarahana.
Ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina dia mety ho lafo amin'ny voalohany, fa amin'ny fotoana maharitra dia hanana antoka ianao fa hanonitra ny zava-drehetra ary hahazoana tombony.
Antony hampiasana loharanon-kery azo havaozina
Farany, holazainay ny antony lehibe tokony hampiadin-tsainao amin'ny angovo azo havaozina:
Izy io dia fomba mavitrika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fampihenana ny fandotoana ary hiady amin'ny fiovan'ny toetr'andro eto amin'ny planeta.
Mamela ny olona na ny olona lavitra na mitoka-monina amin'ireo ivon-tanàn-dehibe hanana fidirana amin'ny serivisy toa ny mandatsa-dranomaso, herinaratra, Agua, solika, sns, izay tsy tonga amin'ny fomba mahazatra.
Ny ankamaroan'ny vokatra dia manana a Vidiny azo ekena. Vokatra sasany ihany no manana vidiny lafo kokoa nefa misy tombony hafa toa ny maharitra sy mahomby kokoa, tsy mandoto, kely ny vidin'ny fikolokoloana sns. Ka ny vidiny dia averina amortisialy ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fividianana vokatra maitso dia manohana ity tsena mitombo ity ary mankafy ny famoronana asa vaovao amin'ny sehatry ny angovo azo havaozina.
Mitsitsy ny teknolojia maitso harena voajanahary, mamokatra kely kokoa entona entona y mandany ka karakaraina ny tontolo iainana. Izy io dia fomba famokarana sy fampivelarana ny asan'ny olombelona amin'ny fomba tsy dia manimba loatra ho an'ny planeta ary noho izany dia tsy manohy mampitombo ny olana ara-tontolo iainana misy.
Amin'ny ankapobeny ny teknolojia ekolojika na maitso tsotra sy mora ampiasaina amin'ny filan'ny mpampiasa isan-karazany izy ireo.
Araka ny hita, ny loharanom-angovo azo havaozina dia mihabe hatrany ary ny dingana mankany amin'ny tetezamita angovo dia manakaiky sy akaiky kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Loharanon-kery azo havaozina sy ny lanjan'izy ireo amin'ny ho avy
Rafael Sanz dia hoy izy:
Tsy fantatro ny antony maharatsy azy hatrany amin'ny fomba famokarana herinaratra any Espana, iray amin'ireo firenena tsara indrindra eto an-tany isika.
amin'ny fanavaozana ny fahefatra na fahadimy manerantany ho an'ny olona sy ny taona, ary amin'ny fifangaroana dia ho iray amin'ireo tsara indrindra any Eropa isika.
Valiny tamin'i Rafael Sanz
Ireo no loharanon'ny angovo tokony hanombohan'ny governemanta hampiharina amin'ireo firenena mba hanomezana fepetra tsara kokoa sy hifaneraseran'ny tontolo iainana… ..
Ny toetra sy ny asan'ny filankevitra momba ny fiarovana nokleary
Fiara elektrika: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao